URafael Caunedo. Udliwanondlebe nombhali wenqweno yeengozi | Uncwadi lwangoku
URafael Caunedo. Udliwanondlebe nombhali Umnqweno weengozi
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Udliwano-ndlebe, Ababhali, Inoveli
Ukufota: URafael Caunedo. Iprofayile kaFacebook.
A URafael Caunedo Ndadibana naye buqu njengemodareyitha kwintlanganiso yabafundi eyayiququzelelwe yi-itombito Cultural ukuze sincokole naye IDomingo Villar. Ndaye ndamlandela. Kwaye ekuqaleni kwale nyanga ukhuphe inoveli yakhe entsha, Umnqweno weengozi. Ndifuna ukukubulela ngobubele bakho kunye nexesha elinikezelwe kule nto udliwano ndlebe apho isixelela ngaye nangokuninzi okuninzi.
UNCWADI NGOKU: Umnqweno weengozi yinoveli yakho entsha. Usixelela ntoni ngayo kwaye yavela phi le mbono?
RAFAEL CAUNEDO: Njengesiqhelo, izimvo zivela kukubuza imibuzo. Ngenye imini, ngengozi, ndabona intombazana encinci kakhulu leyo yayiyinxalenye yeyunithi ye Izixhobo zoqhushululu. Babuya emsebenzini, nabakhuseli babo besekhona, iiyunifomu zabo zinamabala omgubo kunye namaqanda - andifuni kuchaza isizathu- kwaye bajongane neemeko. Xa ndamjonga, ndacinga: Ngaba uza kuba nabantwana? Ngaba umntwana uza kukulinda ekhaya? Ke ndaye ndagqiba kwelokuba ndikhuphe laa mfazi kwinyani kwaye Ndamguqula waba yiBlanca Zárate. Kwaye ndicinga ukuba kwiintsomi kubi kakhulu.
AL: Ngaba uyayikhumbula incwadi yokuqala oyifundileyo? Kwaye ibali lokuqala olibhalileyo?
RC: Inyani yile Ndikhumbula izinto ezishiya mna kuphela uhlobo oluthile lwe indawo yonyawo. Kuya kufuneka ndikhethe inkumbulo. Andikhumbuli ngokukodwa incwadi yokuqala. Ndineengqondo ezingqondweni zam ezazidlula ezandleni zam; ziinkumbulo zobuntwana obonwabileyo. Kodwa ukuba kufuneka nditsho njaniWayeyincwadi eyatshintsha indlela yam yokufunda, yayinjalo INkosi yamakhonkco. Ngenxa yokufunda kwakhe, ndaqala ukugcina iveki nganye ukuthenga iincwadi. Kwaye kude kube namhlanje. Andikwazi ukuhlala ngaphandle kokufunda; kwaye andinakuyenza ngaphandle kokubhala. Ndihlala ndikuthanda ukuyenza, kodwa ndandithandabuza ukubonisa izinto zam. Impazamo. Yonke into yatshintsha mhla ndikhapha umhlobo wam ukuya kwindibano yokubhala. Phakathi kwewayini kunye nezahlulo zecroquettes kunye nee-omelette sifunda amabali ethu. Ngesiquphe ndandibhalela abanye, ndingazenzeli mna, kwaye oko kwatshintsha yonke into.
AL: Umbhali oyintloko? Unokukhetha ngaphezu kweyodwa nakwezinye iindawo.
RC: Ndiyabathanda kakhulu. Ndifunde yonke into. Ndicinga ukuba ndikhetha ngokwemo yeemvakalelo endikuyo. Incwadi nganye, okanye umbhali ngamnye, unalo ixesha lakhe. Ndiyathanda ukufumanisa ababhali abatsha, Ndiyazivumela ukuba ndicetyiswe ngabathengisi beencwadi kunye nethuku lam, kodwa inyani kukuba kukho umbhali owathi, akufumanisa oko, wandenza ndacinga ukuba ndingangumbhali. Ndizithandile iincwadi zakhe kunye naye, imfihlakalo yakhe, ubomi bakhe obungaqhelekanga, ubuntu bakhe. Kwafundelwa UThomas bernhard kwaye nditshintshe umbono wam kuncwadi.
AL: Nguwuphi umlinganiswa osencwadini onqwenela ukudibana naye kunye nokwenza?
I-RC: Kuye nabani na othi, emva kokwabelana ngetafile kunye nendwangu yetafile ngexesha lesidlo sangokuhlwa, ndifuna ukuphinda. Ababaninzi abanokuhlala ngaphezulu kwesidlo sangokuhlwa esinye.
AL: Ngaba unayo nayiphi na imikhwa okanye imikhwa xa kufikwa ekubhaleni nasekufundeni?
RC: Andinangxaki nengxolo, okanye umculo, ndingabhala naphi na. Ndineziko lokungena kwihlabathi lam, nokuba ndikwi cafe engqongwe ngabantu. Ekuphela kwento andinokuyimela kukuncokola kumnyango olandelayo. Ndiyanyanzelisa, andikhathali malunga nengxwabangxwaba, ingxolo, kodwa andikwazi ukubhala kwakamsinya nje ukuba ndichonge amagama ahambelana nentsingiselo.
AL: Kwaye indawo oyikhethileyo kunye nexesha lokwenza oko?
CR: Ndisuka kwii-biorhythms zakusasa. Ingqondo yam iyakhawuleza ngentsasa. Into enomdla kukuba, emva kwemini zilungele ukufunda. Indawo? Ozithobileyo, Andinandawo ilungisiweyo. Ndingabhala ndoyame ngomboko womthi, phantsi komthunzi elunxwemeni, okanye kwikhefi ene-jazz ngasemva. Endlini yam, ndihlala ndiyenza naphina. Kwanele ukuba akukho mntu ecaleni kwam uthetha.
AL: Ngaba zikhona ezinye iintlobo ozithandayo?
CR: Ndifunde ngentshukumisa. Ndishiya iivenkile ezithengisa iincwadi, ndijikeleza kakhulu, kwaye kuhlala kukho incwadi endisebezelayo, "Ndim." Kwaye ndiyayithenga. Inefuthe kwisicatshulwa esikwikhava yangasemva, kwikhava, nakwibinzana elingahleliyo elinethuba lindithabathela kulo.
AL: Ufunda ntoni ngoku? Ukubhala?
RC: Okwangoku ndinaye HamnetNguMaggie O´Farrell.
Ndibandakanyeka kwicebo endikhetha ukungathethi nto ngalo ide ichazwe ngakumbi. Ewe ndiqinisekisa ukuba umlinganiswa ophambili uyakuba lapho engafanelekanga ukuba lapho.
AL: Ucinga ukuba imeko yokupapasha injani kwaye uthathe isigqibo sokuba uzame ukupapasha?
RC: Ngokwezibalo, ISpain lelinye lamazwe apho ipapashwa khona kakhulu kwihlabathi. Kuyaphikisa oko isalathiso sokufunda Ulwandle ezantsi ngaphezu komndilili. Andazi ukuba yintoni le mpikiswano ibangela abapapashi, kodwa ndiyakuqinisekisa ukuba xa sifunda ngakumbi, kungangcono kuthi sonke.
AL: Ngaba umzuzu wobunzima esijamelana nawo unzima kuwe okanye uya kuba nakho ukugcina into elungileyo kumabali exesha elizayo?
RC: Andiqondi ukuba ubhala nantoni na malunga ne-COVID, ukuvalelwa kunye nayo yonke loo nto. Andiziva ngathi. Umhlaba ovela ngaphambili wawubonisa ngakumbi kum, ke Ndibhala ngokungathi khange kwenzeke nto kuba ndiqinisekile ukuba yonke into izakudlula kwaye siya kubuyela kwiingxaki ezifanayo njengesiqhelo, kodwa ngaphandle kwemaski okanye umgama ekuhlaleni. Ndiyakuthanda ukwangana nokuphuzwa kwintlanganiso yokuqala, ngaphandle kokubuzwa ukuba uyagonywa na.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Udliwano-ndlebe » URafael Caunedo. Udliwanondlebe nombhali Umnqweno weengozi
Ngethamsanqa likaRosa Montero